Version 0.6.6 – Farany! ny fiarovana fanafahana
Novambra 12, 2010 amin'ny tolotra 13 Comments
Tianay ny hisaotra Joshua Hansen sy Scott Caveza fa ny fanampiana amin'ny hamantarana sy manampy antsika debug XSS roa izay mora asiana ao izay nanana ny hery anaty mba mampiasa aterineto ireo mpampiasa ataony navigateur mpikaroka tany vaovao tamin'ny dikan-ambany noho 8, na rehefa fiarovana xss dia mazava eny. Dia nisoroka ny faniriana hoe io dikan- 0.6.6.6 ary indray ny fanomezana anarana tsy tapaka ny politika. Ireo izay mora asiana ao donâ € ™ ny hampidi-doza na ny Webmasters na hosters mampiasa Transposh, fa ny mpampiasa izay mety matoky soratra avy amin'ireo toerana amin'ny alalan'ny fampiasana ny sneaky XSS fomba.
Fanafahana izany koa ny fiovana hafa amboarany roa izay efa nataon'ny ka te-angamba niandry ny fanafahana raha tsy izany taty aoriana, ny voalohany ho fanatsarana kely amin'ny parser, manome fahafahana hanao zavatra ho fanohanana bebe kokoa HTML “mpandika sampana” toy ny &rsquo; izay no nahariana ny rindrambaiko miezaka outsmart ny mpampiasa, tianay ny hisaotra archon810 amin'ny fanampiana amin'ny ity tatitra bibikely.
Farany nefa tsy kely indrindra dia ny fanovana ny fanohanany ny Google Sitemaps XML mpamokatra, ilay patch no taratasy iray nesorina mba ho tsara ny fanohanana ny php5.3, sy ny vaovao tsara amin'ny hafa, ny avy Version 4 plugin io dia efa naorina fanampiana, ity dia manampy ihany koa ny dikan ka nivadika ny 50k Url fetra izay mpampiasa ny sasany nanana. Noho izany dia Mangataka misaotra Arne Brachhold amin'ny asa lehibe ao amin'ny tetikasa ity.
Noho izany ny rehetra, mandehana ary hanatsarana! satria nahita sary ho mifanaraka lahatsoratra ity dia sarotra toy izany mendrika.
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: Google-XML-sitemaps, tsy ampy taona, fanafahana, securityfix, WordPress plugin